मन्देकाजी उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, गाैरिका उत्कृष्ट महिला खेलाडी - नेपालबहस
मन्देकाजी उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, गाैरिका उत्कृष्ट महिला खेलाडी
| ८:३७:३३ मा प्रकाशित
गौरीकाले करातेकी अनु अधिकारी, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ तथा ट्रायथलनकी सोनी गुरुङलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेकी हुन् । गौरीकाले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद ‘साग’ मा चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन कास्य पदक गरी नौ पदक जितिन । उनले सागमा सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने तेक्वान्दोका दीपक विष्टको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेकी थिइन । गौरीकाले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा १२ स्वर्ण पदक जितेकी थिइन । गौरीकाले कम उमेरमा ओलम्पिक खेल्ने कीर्तिमानसमेत बनाइएकी थिइन । उनले जापानको टोकियो ओलम्पिक खेल्ने पक्का भइसकेको छ ।
मण्डेकाजीले गल्फका सुवास तामाङ, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, एनलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की तथा फुटबलका विकेश कुथुलाई उछिन्दै उक्त अवार्ड जितेका हुन् । यी सबै खेलाडीले गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद ‘साग’ मा स्वर्ण पदक जितेका थिए । उक्त प्रतियोगितामा मण्डेकाजीले करातेतर्फ टिम काता र एकल गरी दुई स्वर्ण पदक जिते। उनले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा एकल कातामा स्वर्ण तथा टिम कातामा रजत जितेका थिए ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली वर्ष २०७६ को उत्कृष्ट टोली घोषित भएको छ । नेपाल खेलकूद पत्रकार मञ्च ‘एनएसजेएफ’ले आयोजना गरेको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७६ मा महिला भलिबल टोलीले टिम अफ दि इयरको अवार्ड जित्न सफल भएको हो ।
यस्तै गत वर्ष नेपालमै सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद ‘साग’ मा ऐतिहासिक रजत पदक प्राप्त गरेको थियो । महिला भलिबल टोली फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो । नेपाली महिला टोलीले सागमा पहिलोपटक रजत पदक प्राप्त गरेको हो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपाल भारसँग ३–२ सेटले हार व्योहोर्न पुगेको थियो ।
भोटिङका आधारमा भएको पिपल्स च्वाइस अवार्डको उपाधि भलिबलकी कप्तान अरुणा शाहीले जिते । उनले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्दै उक्त अवार्ड जिइन । अरुणाले कूल ३७ दशमलव ५२ प्रतिशत प्राप्त गरिन । उक्त विधातर्फ दोस्रो स्थानमा सागमा करातेमा दोहरो स्वर्ण पदक जितेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ रहे । उनले २८ दशमलव ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । तेस्रो स्थानमा बास्केटबलकी कप्तान सदिना श्रेष्ठ रहे । उनले १३ दशमलव १३ प्रतिशत मत प्राप्त गरे। चौथो स्थानमा रहेकी पौडीकी गौरीका सिंहले १३ दशमलव तीन प्रतिशत तथा पाँचौँ स्थानमा रहेकी महिला फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले सात दशमलव दुई प्रतिशत मत प्राप्त गरिन । अरुणालाई उक्त अवार्ड जिताउनका लागि पोखरामा अभियान नै शुरु गरिएको थियो ।
पोखरामा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरिएको थियो । सागमा नेपालले रजत पदक जित्दा शाहीले उत्कृष्ट कप्तानीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस्तै बङ्गलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्दा पनि उनले नै कप्तानी गरेका थिए । यसैगरी उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड गल्फका सुवास तामाङले जिते । उनले सागमा दुई स्वर्ण पदक जितेका थिए । सुवासले तेक्वान्दोका भूपेन श्रेष्ठ र सिना मादेन लिम्बू, भारत्तोलनकी सञ्जु चौधरी तथा जुडोकी पुनम श्रेष्ठलाई पछि पारे ।
यसैगरी एउटै खेलबाट सर्वाधिक १२ स्वर्ण पदक दिलाउने तेक्वान्दोका प्रमुख प्रशिक्षक नवीनकुमार श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उनले करातेका प्रमुख प्रशिक्षक मदनकुमार उप्रेती, उसुका अमरकुमार थिङ, बक्सिङका प्रकाश थापामगर र पौडीका शङ्कर कार्कीलाई उछिन्दै उक्त अवार्ड जिते ।
यस वर्षको स्पेसल अवार्ड एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ तथा तेक्वान्दोकी आयशा शाक्यले संयुक्तरूपमा प्राप्त गर्नुभयो । दुवै जना १३औँ सागका स्वर्ण विजेता हुन् । उनीहरु आ–आफ्नो खेलका लागि विशेष पदक जित्ने कीर्तिमानी खेलाडी पनि हुन् । सन्तोषीले सागमा महिला १० हजार मिटर दौडमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाएका थिए । यस्तै आयशाले १३औँ सागमा दुई स्वर्ण पदक जितेका थिए । उनले तेक्वान्दोको पुम्सेतर्फ एकल तथा टिम स्पर्धामा स्वर्ण जितेका हुन् ।
पारा एथ्लिट अवार्डबाट यस वर्ष ह्वीलचियर बास्केटबल तथा क्रिकेट खेलाडी दिगमसिंह चेम्जोङलाई सम्मान गरिएको छ । हरेक वर्षको विश्व खेलकूद पत्रकार दिवस, जुलाइ २ मा आयोजना गरिँदै आएको अवार्ड कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष छ महिनापछि धकेलिएको हो । हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीको मुख्य प्रायोजन रहेको अवार्डका वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा खेलाडी तथा वर्ष प्रशिक्षकका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कारस्वरुप प्राप्त गरे । अन्य विधाका विजेताले भने जनही रु ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ ।
गन्धर्व संस्कृतिका धरोहर गायकको निधन १५ घण्टा पहिले
चीन र भारत सीमा क्षेत्रमा फेरि झडप, २४ सैनिक घाइते १३ घण्टा पहिले
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिलाई पनि कोभिड–१९ संक्रमण १२ घण्टा पहिले
नबोल्ने व्यक्तिलाई बोली दिने तीर्थस्थल लाटी बाराही १४ घण्टा पहिले
सरकारको ऋण बढेर १४ खर्ब, हरेक नेपालीको भागमा कति ? १९ घण्टा पहिले
बलेरो आफैँ अनियन्त्रित हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते ६ दिन पहिले
वर्षा नहुँदा यो वर्षको हिउँदमा सुख्खापन र प्रदूषण २ दिन पहिले
डम्पिङ साइट अव्यवस्थितका कारण बजारको सौन्दर्यमा असर ६ दिन पहिले
उपत्यकामा १५४ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए ११ घण्टा पहिले
कांग्रेसको अलमलले प्रदेशसभा अन्योलमा ४ दिन पहिले
कागतीका बिरुवामा पलाएको मुनाले किसान दङ्ग ! ६ दिन पहिले
ओलीलाई तह लगाउ सकिनः प्रचण्ड ३ दिन पहिले
मृगलाई पड्काएको भरुवा बन्दुकले गोठालोको ज्यान गयो ६ दिन पहिले
बुधबार थप ३१८ जनामा कोरोना पुष्टि, ३८३ संक्रमणमुक्त ! ५ दिन पहिले
३० जना एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? ३ हप्ता पहिले
आज पनि उपत्यकाका केही ठाउँमा लोडसेडिङ हुने ६ दिन पहिले
नागढुङ्गामा प्रहरीको असुली धन्दा ४ दिन पहिले
कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति पहिलेको भन्दा धेरै नै खतरा ३ दिन पहिले
कम्बोडियाद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण ३ हप्ता पहिले
प्रहरी भन्छ, जहाज दुर्घटना होइन आगोको मुस्लो हो ! १ वर्ष पहिले
एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिकै अंग भएको नेकपाकाे निष्कर्ष ९ महिना पहिले
अग्रपङ्क्तिमा खटिएका १२ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोनाको संक्रमण ८ महिना पहिले